Redmi Note 9 iyo Redmi Note 9 Pro hadda waa rasmi: shaashadaha DotDisPlay iyo kamaradaha quad | Androidsis
Redmi Note 9 iyo Redmi Note 9 Pro hadda waa rasmi: shaashadaha DotDisPlay iyo kamaradaha afar geesoodka ah
Xiaomi Spain ayaa ku dhawaaqay kii ugu horreeyay ee labadiisa taleefan cusub, Redmi Notes 9 Pro. Qalabku wuxuu sharad ku dhacayaa guddi 6,67-inji ah oo leh xal buuxa oo HD ah oo loo yaqaan DotDisplay iyo ilaalinta Gorilla Glass 5. Saddexda midab ee muuqaalka Pro ayaa xaqiijinaya: glacier white, grey interstellar gray and green tropical.
Dhabarka gadaashiisa waxay ku soo bandhigeysaa kamarad afar geesle ah oo naqshad laba jibbaaran leh oo afar dareemo leh, muraayada ugu weyn waa 64 MP oo cabirkeedu yahay 1 / 1.72 waxaana lagu magacaabaa Super Pixel. Saddexda soo hartay waa 8 MP f / 2.2 xagal ballaadhan, 5 MP macro sensor, tan afraadna waa 2 MP lens lens. Kaamirada sawir-qaadaha (selfie camera) waa 16 MP oo leh AI (Sirdoonka Artiktik) iyo dareeraha faraha waa dhinac dambe.
Processor-ka loo doortay cusub Redmi Note 9 Pro waa Snapdragon 720G, processor loogu talagalay waxqabadka cayaaraha iyo wax ku ool leh shaqada codsiyada ugu badan. GPU-ga la socdaa waa Adreno 618 oo siiya waxqabad aad u wanaagsan, wuxuu ku siin karaa illaa heer cusboonaysiin ah 120 Hz.
1 Batariga, isku xirnaanta iyo astaamo kale
2 Qiimaha iyo helitaanka Redmi Xusuusin 9 Pro
3 Redmi Xusuusin 9, kani waa kan yar labadaba
3.1 Batariga, isku xirnaanta iyo waxyaabo kale oo badan
Batariga, isku xirnaanta iyo astaamo kale
Cimriga noloshiisa taleefankiiba waa 48 saacadood, waa suurtagal mahadsanid 5.020 mAh baytariyada leh 30W lacag deg deg ah, waa mid wax ku ool ah sababtoo ah rakibidda processor-ka runti wax yar cuna. Ku xirnaanta 4G waxaa lagu daraa kuwa kale sida Bluetooth 5.0, dekedda IR, 3.5 mm isku xiraha, USB-C dekedda lacag-bixinta iyo NFC, iyo kuwo kale.
El nidaamka qalliinka waa Android 10 Lakabka caadiga ah ee MIUI, waxay balanqaadeysaa taageerada cusbooneysiinta dhowr sano waxayna la imaan doontaa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee soo saaraha. Sababtoo ah saamigeeda qiimaha-tayada, waa aalad leh dammaanad-qaad ah inaad u baahan tahay inaad si qoto dheer u aragto si aad u qiimeyso.
Qiimaha iyo helitaanka Redmi Xusuusin 9 Pro
Xiaomi Spain ayaa ku dhawaaqay Redmi Xusuusin 9 Qiimaha Pro, Telefoonku wuxuu ku kici doonaa 269 yuuro oo ah nooca 6/64 GB iyo 299 yuuro oo ah nooca 6/128 GB, qiime si cadaalad ah loo hagaajiyay oo ah terminaal noqon doona 4G, in kasta oo Xiaomi ay xaqiijineyso haddii aad iibsato 27-keeda iibinta horay loo sii iibsaday waxay kugu kici doontaa 249 euro. Xaaladdan oo kale, waxaa ka maqan isku xirnaanta 5G adoo ku rakibaya SD720G aan soo sheegnay, kaasoo ku siin doona xiriir 4G ah.
El Redmi Xusuusin 9 Pro waxaa la heli doonaa laga bilaabo Juun 1, iibka hore wuxuu bilaabmayaa laga bilaabo berri, Maajo 27 iyada oo loo marayo bogga soo saaraha taleefanka. Farqiga u dhexeeya midka iyo kan kale ayaa si dirqi ah u ah 30 euro, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad haysato keyd dheeraad ah marka la eego xulashada nooca 128 GB.
MUUQAAL 6.67-inch IPS LCD DotDisPlay - Gorilla Glass 5
PRORESOR Snapdragon 720G
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 64/128 GB oo leh booska MicroSD illaa 512 GB
KAAMARKA DIBADDA 64 MP dareeraha ugu weyn - 8 MP dareeraha xaglaha ballaaran - 5 MP macro sensor - Dareeraha qoto dheer ee 2 MP
KAAMI HOR 16 MP f / 2.48
BATARY 5.020 Mah oo leh 30W lacag deg deg ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 oo leh MIUI
Isku xirnaanta 4G - Wi-Fi - NFC - Bluetooth 5.0 - 3.5mm Jack headphone jack - Dual SIM - IR sensor - GPS - USB-C
Redmi Xusuusin 9, kani waa kan yar labadaba
El cusub Redmi Note 9 Waxay noqon doontaa qalab shaashad hoose leh, guddiga ku jira waa 6,53-inji DotDisplay leh Full HD + qaraar leh 90% shaashad-jirka iyo 450 nits oo dhalaal ah. Dhinacyada Xusuus-qorista 9 waa la xoojiyay waxayna leedahay daahan furin-caddeyn ah.
In macnaha this Xusuusin 9 wuxuu go'aansaday inuu ku sharfo Mediatek CPU, Qaabka la xushay wuxuu ahaa sideed-asaasiga Helio G85 ee fuliya sawirada Mali-G52. Waxaa jira laba nooc oo RAM ah, 3 iyo 4 GB, kaydintu waxay noqon doontaa 64 iyo 128 GB, dhammaantood waa la ballaadhin karaa illaa ugu badnaan 512 GB.
Redmi Xusuusin 9 ayaa wadarta afar kamaradood oo gadaal ah, muraayadaha kore waa 48 MP, kan labaadna waa 8 MP oo ballac ballaaran ah, dareeraha seddexaadna waa 2 MP macro, midka afraadna waa 2 MP sensor sensor. Kaamirada sawir-qaadaha (selfie camera) waa 13 MP akhristaha faroodkuna wuxuu gaarayaa xagga dambe, midig afarta kamaradood.
El Redmi Xusuusin 9 ayaa hayn doona batteriga 5.020 Mah taas oo damaanad qaadi doonta madax-bannaanida qiyaastii 2 maalmood, dhammaantoodna waxay ku mahadsan yihiin waxtarka qalabka Helio. Isku xirnaanta waxaa bixiya modem-ka 4G ee lagu dhex-dhisay, uma baahna isku-xirnaanta Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, dekedda IR, GPS iyo isku xiraha jack-ka 3.5 mm.
Software-ka lagu soo daray sanduuqa waa Android 10 oo leh interface MIUI, nooca ayaa noqon doona kii ugu dambeeyay ee la heli karo isla markaana la cusbooneysiiyo cusbooneysiinta mustaqbalka. Xusuusin 9 sidoo kale wuxuu la socdaa ilaalinta Gorilla Glass 5 waxaadna arki kartaa xoojinta qaabkan iyo nooca Pro.
MUUQAAL 6.53-inch IPS LCD DotDisPlay - Gorilla Glass 5
PRORESOR Helio G85
KAAMARKA DIBADDA 48 MP dareeraha ugu weyn - 8 MP dareeraha xaglaha ballaaran - 2 MP macro sensor - Dareeraha qoto dheer ee 2 MP
KAAMI HOR 13 MP
BATARY 5.020 Mah oo leh 18W lacag deg deg ah
Isku xirnaanta 4G - Bluetooth 5.0 - NFC - GPS - USB-C
MUUQAALO KALE Dareeraha sawirka faraha
El cusub Redmi Note 9 Waxaa lagu heli doonaa ka hor iibinta laga bilaabo Maajo 27 iyada oo laga dhimayo 20 euro, markaa waxay yeelan doontaa qiimo dhan 179 euro, haddii aad ka iibsato 28 laga bilaabo nooca 3/64 GB wuxuu yeelan doonaa qiimo dhan 199 euro iyo 4/128 GB wuxuu gaaraa ilaa 249 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi Note 9 iyo Redmi Note 9 Pro hadda waa rasmi: shaashadaha DotDisPlay iyo kamaradaha afar geesoodka ah
Sida loo furo barbaraha Dolby Atmos ee OnePlus 8, OnePlus 7T iyo OnePlus 7